Volcanoyada ugu khatarta badan adduunka: sifooyinka iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Folkaanaha ugu khatarta badan aduunka
Jarmal Portillo | 17/06/2022 10:55 | Geology
Volcanoes waa ifafaale dabiici ah oo dhaca marka magma ka yimaada gudaha dhulka uu gaaro oogada. Xaaladahan ayaa ka dhaca meelo gaar ah iyo waqtiyo gaar ah. Waxay inta badan ku xiran tahay meesha uu qaladku ka dhacay iyo haddii ay tahay volcano firfircoon ama hurday. Haddaba folkaanaha oo dhami isku mid maaha ee waxay leeyihiin qaabab kala duwan, noocyo kala duwan oo lafaha ah iyo kuwo kala duwan oo awoodo kala duwan leh. Kuwa ugu qarxa ayaa inta badan lagu tiriyaa foolkaanooyinka ugu khatarta badan adduunka.
Qormadan waxa aan kuugu sheegi doonaa volcanoyada ugu khatarta badan dunida iyo waxa ay yihiin.
1 Astaamaha foolkaanaha
2 Foolkaanooyinka ugu khatarta badan adduunka iyo xogta dhaqdhaqaaqooda
2.2 Buurta Etna
2.9 Madoow miinshaar
Xasuusnoow, muuqaalka foolkaanooyinku maahan wax kama' ah. Meesha ay ku taal waxaa badanaa lagu go'aamiyaa dillaaca taarikada tectonic, qaybaha kala duwan ee ka kooban lithosphere. Taarikadani waxay socdaan marka ay dul sabeeyaan marada dareeraha ah ee gudaha dhulka. Marka ay isku dhacaan, ama marka mid ka sooco kan kale, magma ayaa la abuuraa marka lagu daro dhaqdhaqaaqa ka dhashay. Magma waa dareere kulul oo ka samaysan gudaha gogosha. Heerkulka sare, waxay u egtahay inay raadiso meelaha laga baxo, ugu dambeyntii waxay u oggolaaneysaa inay isticmaasho meel kasta oo bannaan oo ka mid ah qolofta Dhulka si ay u gaarto dusha sare. Marka taasi dhacdo, waa marka ay foolkaanooyinku dhashaan.
Si kastaba ha ahaatee, qarxinta foolkaanadu maaha qarax joogto ah oo magma ah. Mar kasta oo foolkaanadu ay magma ka soo tuurto gudaha, waxa la sheegaa in uu qaraxu dhacay. Qaraxyadu waxay inta badan ku xiran yihiin hawlaha gudaha ee Dhulka. Sidan, waxaan ku heli karnaa foolkaanooyin firfircoon oo aan firfircooneyn iyadoo ku xiran inta jeer ee qaraxyada foolkaanaha. Si macquul ah, volcanoyada ugu khatarta badan ee Dunida waxay noqon doonaan volcano firfircoon, sababtoo ah waxay u badan tahay inay soo saaraan magma qarxin oo waxyeello u geysan kara deegaanka u dhow.
Si kastaba ha ahaatee, taasi macnaheedu maaha in volcanoyada hurda aysan haysan suurtogalnimadan, maadaama tiirarka u oggolaanaya magma inay baxsadaan had iyo jeer. Sidoo kale, foolkaanooyinku waxay u muuqdaan inay leeyihiin qarxis aad u yaab badan ka dib muddo dheer oo dhaqdhaqaaq la'aan ah sababtoo ah waxay ku dhacaan qiyaaso waaweyn oo magma ah oo la hayo wakhti dheer.
Foolkaanooyinka ugu khatarta badan adduunka iyo xogta dhaqdhaqaaqooda
Volcano-gan ayaa ku yaalla xeebta dalka Talyaaniga, oo aad ugu dhow magaalada Naples. Waa volcano caan ah ilaa qarnigii XNUMXaad AD Waxay mas'uul ka ahayd aaska magaalooyinka Roomaanka ee Pompeii iyo Herculaneum. Hadda, waxaa loo arkaa volcano deggan. Taas oo ka khatar badan wax kasta oo kale, sida ay saynis yahanadu sheegeen in foolkaanooyinka ka dhasha wakhti dheer ay leeyihiin khatar sare oo waxyeelo ah.
Volcano kale oo weyn oo ku yaal Talyaaniga waa Mount Etna, oo ku taal Sicily ee badda Mediterranean-ka. Sannadkii 1669-kii, qarax foolkaanooyin ah ayaa ku dhuftay magaalada ugu weyn gobolka, Catania. Sannadkii 1992-kii, qarax kale oo kan lamid ah ayaa burburiyay jasiiradda inteeda badan, balse nasiib wanaag ma uusan gaarin magaalada.
Folkaanahani waxa uu ku yaalaa dalka Congo. Waa mid ka mid ah foolkaanaha maanta ugu firfircoon. Daraasiin dad ah ayaa dhintay markii foolkaanadu ay qaraxday 1977. Sidoo kale, 2002, oo ah tii ugu dambaysay, 45 qof ayaa ku dhintay marka lagu daro dhismayaal badan oo magaalooyinka u dhow.
Volcano-gan Indonesia waa mid ka mid ah foolkaanaha ugu firfircoon meeraha oo dhan. Khubarada Volcanoolojigu waxay xisaabiyeen in hawsheeda ay sababto inuu qarxo 10kii sanoba mar ama wax ka badan. Sannadkii 2006dii, qaraxii ugu dambeeyay ayaa dilay kumannaan qof oo ku noolaa agagaarka.
Volcano kale, oo sidoo kale ku yaal Indonesia, wuxuu ku dhow yahay inuu u shaqeeyo Mount Merapi. Qarxitaankiisii ​​ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2002-dii, kaas oo waxyeello u geystay dhul ballaaran oo xuduudda ah. Iyo sidoo kale barakaca dad badan oo ku noolaa agagaarka, inkastoo dhaawaca jireed uu aad u yar yahay.
Waa foolkaano ku yaal Jasiiradda Canary ee Tenerife (Spain). Hadda, waxa loo kala saaray sidii foolkaanno hurday. Si kastaba ha ahaatee, marka ay toosto, waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xun jasiiradda oo dhan, khubarada volcanologists ayaa leh. Ma iloobi karno in Canary Islands ay ka kooban yihiin jasiirado volcano ah, taas oo ina siinaysa fikradda awoodda dhacdadan.
Volcano-gan ayaa ku yaalla Japan, gaar ahaan jasiiradda Kyushu. Waa foolkaano firfircoon oo markii ugu dambeysay ay qaraxday sanadkii 2009. Marka laga soo tago khatarta ka imaan karta joogitaanka Volkaanaha, waxaan ka hadleynaa meelaha ay ku badan yihiin tirada dadka, taas oo sidoo kale kordhisa khatarta ah in volcano uu carqaladeeyo shaqada daadgureynta. .
Waxay ku taallaa Mexico, oo kaliya 70 kiiloomitir u jirta Degmada Federaalka, Volcano waa khatar dhab ah marka loo eego dadweynaha magaaladan weyn. Dhab ahaantii, Popocatepetl waa mid ka mid ah in ka badan 20 volcanoes oo ku baahsan Aztec National Geographic, iyo sababtoo ah waxay ku fadhidaa inta u dhaxaysa dhowr taarikada tectonic aadka u firfircoon, waxaa lagu xusay waxqabadkeeda seismic ee xooggan.
Si aan u soo gabagabeyno dib u eegistayada foolkaanada ugu khatarta badan aduunka, wali waa inaan xusnaa Sierra Negra ee jasiiradaha Galapagos. Waa mid ka mid ah foolkaanooyinka ugu firfircoon ee dhulka, waxaana qaraxii ugu dambeeyay uu dhacay 2005. Xaaladdan oo kale, ma aha inaan ka hadalno khatarta ay u leedahay bini'aadamka, sababtoo ah Galapagos Islands maaha kuwo aad u badan. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka kooban yihiin nidaam deegaan oo kala duwanaansho noole oo aad u weyn taasoo si joogto ah u halis gelisay dhacdadan dabiiciga ah.
Volcano Eyjafjallajökull, oo ah titan in ka badan 1.600 mitir ka sarraysa heerka badda, waxa uu ku dul taagan yahay barafka, waxana uu shaqaynayey 8.000 oo sano ee u dambeeyey. Qarniyo kala duwan ayay soo martay, waxaana ugu caansan qaraxyadii ugu dambeeyay ee 2010. qiiqa sii daaya waqooyiga Yurub ayaa xakameynaya, oo awoodi waayay inuu shaqeeyo sababo la xiriira hakinta folkaanaha dambaska, taasoo qasabtay in boqolaal duullimaadyo la joojiyo maalmo. Haddii aad rabto inaad sahamiso buurtan weyn, waxaad raaci kartaa wadada xeebta koonfureed ee Iceland.
Beerta Qaranka ee Izta-Popo Zoquiapan, waxa kale oo jira mid ka mid ah foolkaanaha ugu khatarta badan adduunka oo lagu magacaabo Iztaccihuatl. Waxaa la sheegaa in labadan nin ee isku caleemo saaray deegaankan dabiiciga ah ay yihiin laba isjecel oo asal ahaan ka soo jeeda oo qiso jacayl oo naxdin leh ay soo martay.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto foolkaanaha ugu khatarta badan adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Folkaanaha ugu khatarta badan aduunka
Farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada